20ka Feberweri waxa Somaliland looga yaqaannaa maalinta dhallinyarada Somaliland waxaanay ka dhalatay xadhig, cadaadis iyo dil loo geystay macallimiin, aqoonyahanno iyo arday ka mudaharaadday xukun la saarayay dhallinyaro samafaleyaal ah. Waxa xadhigga raggaas kaalin ku lahaa Injineer Faysal Cali Waraabe, waxaanu qayb ka yahay murugada sannad walba laga xusayo halkii lagu dilay ardaygii diiddanaa in makamad la saaro macallimiintiisa oo Barre la odhan jiray.
Muxuu ahaa horumarka aad sheegaysay ee Gaanni inna gaadhsiin lahaa?
Ma xasuuqa iyo xadhigga ayaa ahaa horu-socod?
Ma in uu kaa badbaadiyay “xatooyo xoolo dadweyne” ayaad kaga abaal-celisay in gudaha la dhigo 28 aan waxba galabsan?
Halkee ayaad joogtay 1988-1991 oo aanu annaga oo afarjir ah garaamkayagii qamaddida ahaa ugu deeqnay SNM?
Halkeed ku sugnayd markii dalku la soo noqday madax-bannaanida 18kii Mey 1991?
Haddii uu Gaanni sidan kuu badbaadiyay, waa maxay nacaybka aad Farmaajo iyo Maxamed Siyaad Barre u muujisaa?
Ma u diyaar tahay madal furan oo aad kaga jawaabto doorkii aad ku lahayd xadhigga UFO?
Buugga: The Mourning Tree (An Autobiography and a prison memoir) Author Mohamed Barud Ali, 2010 printed by Ponte Ivisible, Italy pages 34-35